Waa maxay Sakura micnaheedu? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulWaa maxay Sakura micnaheedu?
Maxaa loola jeedaa sakura?
Maanta, Başakşehir Çam iyo Isbitaalka Magaalada Sakura waxay galeen awood buuxda iyadoo ay ka qeyb galayaan Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan iyo Raiisul Wasaaraha Japan Shinzo Abe. Cusbitaalka, oo leh awood u leh inuu qaado 35 kun bukaan-socod maalin walba isla markaana leh 500 qalliin, ayaa leh 725 qolal polyclinic ah iyo 3 qol qalliin, oo 90 ka mid ah ay yihiin hybrid. Başakşehir Çam iyo Isbitaalka Magaalada Sakura, oo u adeegi doona 107 laamood, waxay leeyihiin 4 adeegyo gurmad oo kala duwan: Dadka Waaweyn, Cunug, Dhaawac iyo Dhalmada.
HOSPITAL -KA wuxuu ku fidin doonaa ADEEGYADA 107 astaan ​​oo wuxuu noqonayaa 4 U SAMEEYA ADEEGYADA GUUD
Iyada oo leh 725 qolal bukaan-socod, 3 qol qalliin, oo 90 ka mid ah ay yihiin isku-dhafan, cusbitaalka wuxuu awood u leeyahay in uu helo 35 kun bukaan-socod maalin walba iyo in uu qabto 500 qalliin oo gaar ah. Isbitaalka, oo u adeegi doona 107 laamood oo loogu talagalay carruurta iyo dadka waaweyn, ayaa bixiya baaritaanno caafimaad oo sareeya iyo tas-hiilaad daaweyn oo leh aaladaha caafimaad ee ugu horumarsan iyo qalabka. Başakşehir Çam iyo Isbitaalka Magaalada Sakura waxay leeyihiin wadarta 456 sariirood, 2 ka mid ah waa sariiro daryeel oo degdeg ah. Waxaa jira 682 adeegyo degdeg ah oo kala duwan, oo ay ku jiraan Qaangaarka, Ilmaha, Dhaawaca iyo Dhalmada, oo ku dhow aag xidhan 30 mitir oo laba jibbaaran. Waxaa jira 4 goobood oo lagu indho indheeyo, halkaas oo ay jiraan qolal cadaadis taban ah iyo halka lagu bixin karo xaaladaha daryeelka degdegga ah ee degdegga ah, waaxyada xaaladaha degdegga ah, kuwaas oo leh cutubyo baaritaan iyo daaweyn ah oo ugu yaraan ugu yaraan 7 kun oo bukaanno ah maalin walba.
Maxaa cusbitaalka loogu magacaabay Sakura? Muwaadiniintu waxay bilaabeen inay baaraan fahmada Sakura iyadoon wax ogayn. Marka waa maxay Sakura micnaheedu, maxay tahay magaca cusbitaalka cusub ee Sakura la furay?
WAA MAXAY SAKURA?
Turkiga, oo ah eray reer Japan ah, waxaa loola jeedaa “Cherry Blossom”. Sakura waa nooc ka mid ah "geed Teriba" oo aan midho dhalin. Waa ubax ka mid ah geedaha yar ee hidde Prunus. Sakura waxay muhiimad weyn u leedahay dhaqanka Jabbaan waxayna ka mid tahay astaamaha qaran ee Japan.
Ubax Tani waxay fureysaa usbuucii ugu dambeeyay ee Maarso iyo usbuuca ugu horreeya ee bisha Abriil, oo Japan dhexdeeda muddadan waxaa loo arkaa inay qoduus tahay In badan sidaa darteed "Xaaladda Sakura" ayaa la bixiyaa cimilada ka dib. Muddadan marka ubaxu ubaxu waa xilliga ay Japan aqbasho dalxiisayaasha ugu badan
WAA MAXAY MAGACA SAKURA SI AY UGU SIIYO CUDURKA?
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray ku sheegay Isniinta maanta ah: “Waxaan u magacownay isbitaalkan Başakşehir Çam iyo Isbitaalka Magaalada Sakura. Waxaan is idhi waa in Pine na matalaa. Sakura ayaa tiri Japan. ”
Wejiga koowaad ee cisbitaalka ayaa la furay Abril 20. Maanta inta soo hartay ayaa howsha geli doona.
Kuwa dhisaya cisbitaalka waxay bilaabeen dhismaha warshada sanadkii 2016 sida ku cad macluumaadka kujira goobta Renaissance Holding, oo ay sameysay wasaarada caafimadka oo la sameesay qaabka iskaashiga dowlada ee gaarka loo leeyahay waana mashruucii saddexaad ee ugu weyn ee maalgashi caafimaad uu sameeyo Turkiga.
Isbitaalka, oo leh dhul gaaraya 1 milyan oo mitir oo laba jibbaaran, wuxuu leeyahay 2 kun 354 sariirood iyo 456 sariiro daryeel oo aad u sarreeya.
Duqa Magaalada Kadir Topbas: Sheeg waxaanu nahay Metro
Waa Maxay Meelaha Laydhka Digniinta albaabka Darawalka?
Macneheedu waa tareenka xawaaraha sare iyo tikidhada xafladda ee Bursa
Binali Yildirim: Gawaarida ma macno ah marka Marmaray jiro
Isku darka TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ iyo TÜVASAŞ
Maxaad u maleyneysaa in Keçiören Metro uu dhammaaday?
Nidaaminta macnaheedu waa Musiibo Musiibo!
Gaadiidka taraafikada ee aan doonaynin inuu bixiyo kharashka wadada
Wasiirka Pekcan wuxuu ku dhawaaqay hal-abuurka ku saabsan taakuleynta Musqulaha
Waa kuma Necip Fazıl Kısakürek?
Iskuulka Mashiinka Mashiinka Duulista ayaa la furay
Maanta taariikhda: 26 May 2005 Inta u dhaxaysa Aliağa -Menderes
Gawaarida telefishinka ee u socdaalaya Antalya Tunceli
Wareegtada qoob-ka-ciyaarka ee Babadaga
Gawaarida telefishinka ee imanaya xeebta
40 tareen cusub oo tareen ah ayaa imanaya IZBAN